မင်္ဂလာပါရွာသူရွာသားတို့ (မန်းဂေဇတ်သို့မိတ်ဆက်ခြင်း) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » မင်္ဂလာပါရွာသူရွာသားတို့ (မန်းဂေဇတ်သို့မိတ်ဆက်ခြင်း)
Posted by မိုချို on Mar 19, 2012 in Copy/Paste | 41 comments
ကျမက မန်းဂေဇတ်မှာ ခုမှ post တွေ တင်ဖြစ်ပေမယ့် စဖတ်ဖြစ်တာ ၂၀၁၀ ဇူလိုင် လောက် ကတည်းကပါ။ မျက်စိလည်ပြီး ရွာထဲရောက် လာပေမယ့် သဘောကျသွားလို့ နောက်ဆုံး စာမျက်နှာအထိ ပြန် ဖတ်ဖြစ်တယ်။ အဲတုန်းက ခုလောက်တောင် ရွာသူားတွေ မစုံသေးဘူးရယ်။
မန်ဂေဇတ်ကို သဘောကျတာက မန်ဘာအများကရေးတဲ့ အကြောင်းရာစုံ၊ ပုံစံ အစုံ ဖတ်ရလို့
ပဲ။ ကွန်ပျုတာ ဖွင့်ပြီးတာနဲ့ ပထမဆုံး ၀င်ဖြစ်တဲ့ ဆိုဒ်က မန်းဂေဇတ်ပဲ။ အသစ်တက်သမျှ ပိုစ့်အကုန်လုံး ဖွင့်ဖြစ်တယ်။ စိတ်ဝင်စားရင်တော့ အစအဆုံး၊ သိပ်စိတ်မ၀င်စားရင်တောင် အစ နဲ့ အဆံုး ဖတ်တယ်။ ကွန်မန့်တွေဆိုလည်း မလွတ်တန်းပဲပေါ့။ ပြောရရင် ရွာထဲမှာ အသံတိတ် ချောင်းနေတာ ကြာပြီဆိုပါတော့။ ရွာသူားအားလုံးကိုလည်း ကျမဘက်က ရင်းနှီးနေပြီးသားပါ။
ကျမက မိုချိုပါ။ BE နဲ့ကျောင်းပြီးပေမယ်. လက်ရှိ အလုပ်အကိုင်က မန်နေဂျာ၊ စာရင်းကိုင်၊ စာရင်းစစ်။ အဲ့ ရာထူးတွေ ဘယ်လိုရထားလဲ ဆိုတော့ ချစ်ချစ်ကြီး နဲ့ သားတော်မောင်ကို ဟိုလိုလုပ်၊ ဒီလိုမလုပ်နဲ့၊ ဘာစား၊ ဘာဝတ်၊ ဘယ်အချိန်ထ၊ ဘယ်အချိန်အိပ်၊ ဒီအပတ် ပိတ်ရက်ကို ဘယ်သွားမယ်၊ ဘာလုပ်မယ်၊……..မယ် ၊…….မယ် အဲလိုစီမံညွှန်ကြားရတော့ မန်နေဂျာပေါ့။
ချစ်ချစ်ကြီးရဲ့ လစာ ထုတ်ပြီး ရင် အိမ်လခက ဘယ်လောက်၊ ရေဘိုး မီးဘိုးက ဘယ်လောက်၊ ဖုန်းဘေ ဘယ်လောက်၊ အင်တာနက်ဘေ ဘယ်လောက်၊ ဘယ်လောက်၊ ညာက ဘယ်လောက်၊ …….ဘယ်လောက်…………ဘယ်လောက် ၊ လက်ကျန်က ဘယ်လောက် ဆိုပြီး စာရင်းတွေ အမြဲ ညှိနေရတော့ စာရင်းကိုင်ပေါ့။
ချစ်ချစ်ကြီးအတွက် ပေး ထားတဲ့ ခွဲတမ်းကို ဘာ ဘယ်လောက်သုံးလဲ ၊ MRT ကဒ် ဘယ်လောက်ဖိုး ဖြည့်လဲ၊ ထမင်းစားတာက ဘယ်လောက်ဖိုးလဲ၊ ဘီယာက ဘယ်နှဘူး ၀ယ်သောက်ပြီးပြီလဲ၊ …….လဲ ……….လဲ၊ အသေးသုံးတာ တဆယ်တောင် ကုန်သလား ….လား၊ …..လား၊ အဲလို စစ်ရ ရစ်ရတော့ စာရင်းစစ်ပေါ့။ ထမင်းချက်၊ သန့်ရှင်းရေး၊ နာနီ ရာထူးတွေ ကတော့ အဆစ်ပေါ့။
မြန်မာပြည် မှာ တုန်းကတော့ အေအီး လို့ ၃နှစ်လောက် ခေါ်ခံရဘူးတယ်။ အေအီး ဆိုလို့ ဆောက် လုပ်ရေးတို့၊ ဆည်မြောင်းတို့၊ လျှပ်စစ်တို့၊ ဆက်သွယ်ရေး တို့ လို လက်ဖျား ငွေ သီးတဲ့ အေအီး ပြေး မမြင်လိုက်ပါနဲ့။ လူသိမများ တဲ့ ဌာနတခုမှာ လစာလေး ၈၀၀၀၀ ကို သုံးခါနီးတိုင်း နှစ်ရွက် ကပ် ပါမသွားအောင် အထပ်ထပ် ပွတ်ပြီး သုံးခဲ့ ရတဲ့ အေအီးပါ။
ခုတော့ ခြင်္သေ့ ကျွန်းမှာနေတယ်။ အလုပ် အကိုင်က ပြော ခဲ့တဲ့အတိုင်းဆိုတော့ တနေ့နေ့ အင်တာ နက် ရှေ့ ငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီး ကမ္ဘာပတ်လိုက်၊ ရွာပတ်လိုက် ပေါ့။ ရွာထဲ ၀င်ရေးချင်ပေမယ့် လက်မသွက်
တာက တကြောင်း ဆရာ့ ဆရာ ရွာ သူား များကြားထဲ ၀င်ရေးရမှာ မ၀ံ့ရဲ ပါသောကြောင့် တကြောင်း တိတ်တိတ်ပုန်း ဖတ်သူ အဖြစ်သာ ကြာနေပါ၏။ ပထမဆုံး ပိုစ့် မှာ ကွန်မန့် လေးများ ရရှိ ပါသောကြောင့် အားတက်ကာ ဆက်ရေးမိပါ၏။ ပထမဆုံးပိုစ့် မှာ ကွန်မန့်များချီး မြှင့် ပေးသော သဂျီး နှင့် တကွ ရွာသူရွာသားတို့ အားကျေးဇူး တင်ပါကြောင်းနှင့် ယခုမှစ၍ ပေါ်တင် ၀င်ပွားတော့ မည်ဖြစ်ပါကြောင်း။
အဲ…… ပြီးသေးဘူး။ ပိုစ့်တင်တော့ user ကို mocho လို့ပေးပြီး passward ကတော့ ဘယ်တော့မှ မမေ့ တဲ့ မွေးနေ့ ပေါ့။ ပိုစ့် တတ်လာတော့ mm co ဖြစ်နေပါ၏။ မန်ဘာဝင်ဖြစ်တာ ဦးဘလက်ရဲ့ ကျောင်းတော်ကြီး ဓါတ်ပုံတွေ တင်တည်းက ၀င်ပွားတော့မယ်ဆိုပြီး စ၀င်ဖြစ်တာဆိုတော့ ကိုယ့်ဘာ ကိုယ် ဘယ်နေရာမှာ mm co ပေးခဲ့ မိလည်း မှတ်မိတော့ဝူး။ ရေးသု နေရာမှာ user အတိုင်း mocho ဖြစ်ချင်တယ်။ စိန်ပေါက်ပေါက်ရေးတဲ့ ဂေဇတ်လမ်းညွှန်မှာ ဖတ်ဖူးပေမယ့် ပြန်ရှာရမှာပျင်းတယ်။
ကျွန်ုပ်ထက် ဝါ ရော၊ ရာထူး ရော ၊ ဘာရောညာရော ..
ကြီးမြတ်လှတော်မူပါသော … မမိုချို ခင်ဗျား ……..
ကျွန်ုပ်မှလည်း မင်္ဂလာပါလို့ ဦးစွာ ပထမ မင်္ဂလာ ဖြစ်ပါစေကြောင်း ပြန်လည်၍ နှုတ်ခွန်း ဆက်သလိုက်ပါ၏ …။
User Name ပြောင်းချင်သည်နှင့် ပတ်သက်၍မူ ပို့စ်များ တင်သော နေရာ၊ Dashboard ၏ ဘယ်ဘက် အခြမ်းတွင် Profile ဟူသော နေရာ ရှိပါ၏ …
ထို Profile ကို နှိပ်လိုက်ပါ …။ ပေါ်လာပါက Nickname ဟူသည်ကို တွေ့ပါလိမ့်မည် …။ အဲဒီ ဘေးနားက Box ထဲမှာ ပေါ်ချင်တဲ့ နာမည်ကို ရေးထည့်လိုက်ပြီး အောက်ဆုံးနားက အပြာရောင် button ကြီး Update Profile ကိုသာ နှိပ်ချလိုက်ပါတော့လို့ … ။
စိန်ပေါက်ပေါက် မည်ကျော် ဆြာပေါက်ဖော်ရဲ့ ဂေဇက် လမ်းညွှန် ကတော့ ဟောဒီ နေရာမှာပါလို့ ….
အဟီးးး ရွာထဲက လူပျိုဂျီးဒွေကို ကြောက်လို့ ကြိုပိတ်ထားသလားပဲ
edit my profile ထဲကပြောင်းကြည့်ပါ့လား၊ သိသလောက် ရမ်းတီးလိုက်ပြီ။
ရွာထဲက ဆရာ့ဆရာဂျီးဒွေ လမ်းပြပေးပါလိမ့်မယ် :smile:
စကီလေး ဆို ကူညီမို့ဟာ ….
ချစ်ချစ်ဂျီး နဲ့ သားတယောက် ရှိဒယ်ဆိုလို့..
ဘာမှ မပြောဘဲ ပြန်ထွက်သွားဘာသည်…..
p.S ရွာထဲသို့ ၀ဲလ်ကမ်း ပါကြောင်း..
အဲ့လောက်လဲ ချစ်ချစ်ကြီး ချစ်ချစ်ကြီး လို့ မကြေငြာပါနဲ့ အင်းနော် စိတ်ဆိုးလာပြီ။ မင်္ဂလာဆောင်ရင် လှမ်းပြီးတော့ကို ဖိတ်လိုက်အုံးမယ်။ဒါဘဲ ။
အတူတူ ကဲတာပေါ့ ရွာထဲမှာ အပြင်မှာတွေ့ရင် ပိုက်ဆံချေးမယ် မမကြီး mmcho
nick name ကိုပဲပြောင်းလို့ရတယ်ထင်တယ်။
user name ကိုတော့ ပြောင်းလို့မရဘူးလို့ထင်ထားတာ..
ကျုပ်ကတော့ ဒီရွာထဲ ပဲပြုတ်ရောင်းရင်းရောက်လာတာ
ကျုပ်က အကြော်ဆို သိပ်ကြိုက်…
ပဲပြုတ် ၅ ပိဿာလောက် ပေးပါ.. အလှူနေ့ကျရင် ရွာသားတွေကို ပဲပြုတ်ကျွေးမယ်။
ဗီတာမင် အပြည့်ပါတဲ့ ပဲပြုတ်ကျွေးပြီး ခွန်အားရှိတဲ့ ဂေဇတ် ရွာသားများ ဇြစ်လာအောင်.. ဟဲဟဲ
ဟုတ်ကဲ့.. သများအခု ဘိုးဘွား ရိပ်သာ မှာ အလုပ်ဝင်နေပါတယ်…
ဘယ့်နှယ့် နှူးဘာဂျုပ် ကိုမှ အဘိုးကြီးဒွေကြား
ငြီး မပြောပါဘူးအေ.. ပဲပြုတ်ဝယ်တာတောင် ကြားထဲက သူ့အကြောင်းလေး လှမ်းပြီး မားကတ်တင်း ဆင်းနေတယ်။
အတည်ပြောရရင် ပထမပိုစ်ကို မဖတ်လိုက်ရပါဘူး။
ရေးရေး ဖတ်ဖတ် အသင်းဝင်ဝင် မ၀င်ဝင် စီနီယာ ကျကျ မကျကျ
ဒီဂေဇက်ထဲရောက်လာတယ်ဆိုရင်ကို ဘဲ ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာကြိုဆိုပါ၏။
ကိုယ်သိခဲ့ကြုံခဲ့တာလေးကို ပြန်ပြောပြတယ်လို့ ခံစားရင်းစာရေးပါ၏။
နည်းနည်းမှစ၍ များများရေးနိုင်ပါစေလို့ တိုက်တွန်း ပါ၏။
ရွာသူ အသစ်ကလေးကို ကြှိုဆိုပါတယ်။
ပျော်စရာ ကောင်းပြီး စည်ကားတဲ့ ရွာလေးမို့ ဆူးလည်း ရွာသက် ကြာနေပြီ။
ကြိဆိုပါတယ်ဗျာ ဒီရွာလေးကနွေးထွေးပါတယ် အေးချမ်းပါတယ်
ပြောရရင်.. ခြင်္သေ့ကျွန်းမှာ.. မြန်မာအင်ဂျင်နီယာတွေအများကြီးပဲနော…
မြန်မာပြည်ရေနက်ဆိပ်ကမ်း၂ခု ထိုးတက်လာလို့.. မြန်မာအင်ဂျင်နီယာတွေ ပြည်တော်ပြန်ကြရင်.. ဘယ်လိုလုပ်ကြမလည်းတောင် မသိဘူး..
( မဖြစ်လာနိုင်ပါဘူး.. နောက်တာပါ)
မဏိပူရ တဲ့..။ သီဟပူရတဲ့..
mm co says:
ကျေးဇူးပဲ အံဇာတုံးလေးရေ စမ်းကြည့် လိုက်ပါအုံးမယ်။
မီးမီးက အန်တီ အရွယ် ဖြစ်နေပြီ ဆိုတော့ ရွာထဲက လူပြိုဂျီး၊ လူပြို လေး များကို ကြောက်ပါဝူး။
အလုပ် အကိုင်နဲ့ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် တယောက်မဟုတ်တဲ့အတွက် ရေးလတ္တံ့သောစာများရဲ့အဆင့်အတန်းကို ကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်ရန်အလို့ငှာမီးမီးရဲ့အရည်အချင်းများကို ကြေညာရခြင်းဖြစ်ပါ၏။
ဂေဇတ်ထဲ ရောက်ပြီး နောက်ပိုင်းကိုပြန်ရှာဖတ်ဖြစ်တဲ့ ထဲမှာ လေးပေါက်ရဲ့ပိုစ်တွေ အများဆုံးပေါ့။
ဂီဂီရဲ့ပိုစ်တွေ စဖတ်ရတုန်းက ဗဟုသုတ နှံ့စပ်တဲ့ မင့်ကို အသက် ကြီးပြီထင်နေတာ။ နောက်မှအတော် ငယ်သေးမှန်း သိတာ။ ချီးကျူးပါတယ် ဂီဂီရေ။
(မီးမီးက ဦးဦးပြေတီဦးနဲ့အတန်းတူ၊ မေဂျာမတူ ဖြစ်ပါ၏)
ကျမစာ ရိုက်နေတုန်း ကွန်မန့်တွေ များကြီး ဖြစ်သွားပြီ။ ကျမစာရိုက် အဲလောက်မြန်တာ။
ဟုတ်ပါတယ် သဂျီးရေ ကျမတို့ တကျောင်းလုံးနီးပါးပါပဲ။ အစိုးရ၀န်ထမ်း လုပ်နေတဲ့သူတွေ လောက်ပဲကျန်မယ် ထင်တယ်။ ကုမ္ပဏီ ၀န်ထမ်းဆိုရင်လည်း တော်တော် လစာကောင်းတဲ့သူလောက်ပဲကျန်တယ်။ကျမကတော့ အင်ယာ တွေ အတွက် အလုပ်ပေါတဲ့ စလုံး မှာ အကြာင်းကြောင်းကြောင့်ဘာမှမလုပ်ပဲ မှီခိုသူ ဖြစ်နေရတာ ဒီပရက်ရှင် မရအောင် ကြိုးစားနေရတယ်။
မင်္ဂလာပါ မမိုချို ။ ရေးသူနေရာမှာ mocho ပြောင်းလို့ ရပါတယ် ။
ပြောင်းပြီး သွားရင် ယခု ရေးထားတဲ့ comment တွေမှာ mm co ဖြစ်နေတာက လွဲရင် ကျန်တာ mocho ပြောင်းသွား မှာပါ ။ စုစုပေါင်းမန့်ထားတဲ့ အရေအတွက်ကတော့ မပြောင်းပါဘူး ။
မင်္ဂလာပါ အမ ကြိုဆိုပါတယ်။
အမဒီရွာထဲကို ရောက်လာရင် ဒီပရက်ရှင်ဆိုတာ ဘာလဲလို့တောင် မေးယူရအောင် မေ့သွားပါလိမ့်မယ်
မင်္ဂလာပါmm co ရေ…..
ဆက်ရေးမယ့် စာပဲ ဖတ်နေမယ်
အာအိုင်တီ က ကိုယ့်ကျောင်း မဟုတ်ပေမဲ့ ကိုယ်သွားချင်ခဲ့တဲ့ ကျောင်း ရဲ့ သမီးလေးမို့ အားကျ ဂုဏ်ယူပါတယ်။
မိုချို ရဲ့ ၈၈/၉၆ နောက်ပိုင်း ချစ်ချစ်ကြီး နဲ့ သားတော်မောင် ပုံပြင်လေး တွေ ကိုလဲ နားထောင်ဖို့ မျှော်လင့်နေပါတယ်။ :-)
ကွန်မန့် များပေးသောရွာသူရွာသား အပေါင်းအား ကျေးဇူးတင်ပါ၏။ စာရိုက်နှေးသောကြောင့်တယောက်ချင်းကိုရှဲ့ရှဲ့မလုပ်နိုင်တာ ခွေး လွှတ်ပါ။ဤပိုစ့်ကိုရေးတာ၂နာရီလောက် ကြာပါ၏
ဦးမာဃ ကြီးကလဲ ကြိုဆိုပါတယ်။
ဦးမာဃ (ခေတ္တ လူ့ပြည်)
ကဲ ၀ိုင်းတော့ အားရပါးရ မန်းပြီးပြီ။
မမကိုကို ဘက်က ရေးဘို့ဘဲကျန်တော့တယ်နော်။
မိုချိုလေး ကို ကူညီချင်ပါတယ်ကွယ် ၊ ခက်တာက အဲ့ကိစ္စက သဂျီးအူးကိုင် တို့ငပေါက်ဖော်တို့ မှသာ ကျွမ်းကျင်ကြတဲ့ အမျိုးကလား ။ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ရွာသူ အသစ်လေးအား နွေးနွေးထွေးထွေး ကြိုဆိုပါကြောင်း နော် ။
နှစ်ထုပ်ဝယ်ရင် တစ်ထုပ် လက်ဆောင်ပေးတယ်
ကြည်.သာရှောင်တော.ဆရာရေ …..ဟဲ ဟဲ
(လစ်ပြီ လေးပေါက်ရေ …..)
မိုင်ဆွန်ခ ရှမ်းလိုနှုတ်ဆက်တာပါခင်ဗျာ မင်္ဂလာပါလို့ပေါ့ အသစ်အသစ်ချင်းမို့ ကြိုဆိုပါ၏လို့ပြောတော့ပါဘူး
တူတူပဲရွာရိုးကိုးပေါက် လျှောက်ပြီးဂေါ်လီလိုဒိုးရအောင်လို့ပြောပါရစေ အန်တီမိုချို(ကျွန်တော့်ထက်အသက်ကြီးလေတော့)
ဂေဇက်ရဲ့စာမျက်နှာများကလည်းများသလားမမေးနဲ့ တစ်ခါတုန်းက ကိုသန်းထွဋ်ဦးက
မတွေ့ဘူးဗျ ကျွန်တော်လည်းမရေးတတ်ဘဲရေးနေတဲ့ရှမ်းပြည်ကလူရှုပ်တစ်ယောက်မို့ အဖော်တစ်ယောက်တိုးလာတော့
လေးစားစွာဖြင့် ရှမ်းပြည်သား(တောင်ပိုင်း) စကားမစပ် ဒီပို့စ်ကို စွယ်တော်ရွက်တစ်ယောက်မမန့်သေးဘူး
မင်္ဂလာပါလို့ ဦးစွာပထမ နှုတ်ခွန်း ဆက်သလိုက်ပါသည်……..ကျွန်ုပ်ထက် ဝါ ရော: ရာထူး ရောကြီးပါသော … မမိုချို ခင်ဗျား
ကြောင်တတ်မတော်ကြီး၏ ကိုယ်စား ကြောင်လေးမှ လှိုက်လှဲပျူငှာ၊နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုလိုက်သည်။
အစ်မ မိုးချို မင်္ဂလာပါ၊ မနေ့က တစ်နေ့လုံး ကွန်နက်ရှင်အဆင်မပြေလို့ အခုမှပဲ နှုတ်ဆက်ရတော့တယ်..
မမိုချိုလား မမိုးချိုလား မင်္ဂလာပါ…. မမMCလို့ခေါ်မယ်နော် MG ကခိုင်ခိုင်က အိမ်မှုတာဝန်ထမ်းဆောင် ရတယ်ဆိုတာ တစ်ကယ်တော့လွယ်တဲ့အလုပ်မဟုတ်ပါဘူး မီးမီးကတော့ မိန်းကလေးသာဖြစ်တာ အိမ်မှုတာ ၀န်ကို ကျေပွန်အောင်မထမ်းဆောင်နိုင်ဘူး အခုလို အိမ်မှုတစ်ဖက်နဲ့ရွာထဲဝင်နိုင်တာချီးကျူးပါတယ် ….မီးမီး နဲ့အဝေးဆုံးနေရာတွေက ဈေး၊ မီးဖိုချောင် အဲဒီနေရာတွေပါပဲ ဈေးသွားရတာ ထမင်းဟင်းချက်ရတာလောက် ခေါင်းစားတာမရှိဘူး သူများချက်တာကိုစားရတာအကောင်းဆုံးပဲ မီးမီးက ချစ်ချစ်ရှာရင် အဲဒါတွေလုပ်ပေး နိုင်တဲ့သူကိုပဲရှာမှာ …..
မမကြီးခိုင်ရေ……… ဒွေးဆိုသွားတဲ့သီချင်းလေးထဲကလို မူပိုင်ရှင်မကြီးမမခိုင်လို့ခေါ်လိုက်မယ်နော်။
အဲလိုချစ်ချစ်မျိုးလိုချင်ရင် ရှမ်းပြည်သားကိုအရင်စဉ်းစားပေးနော် ကျွန်တော်ကအိမ်မှုကိစ္စလည်း
လုပ်တတ်တယ် ။ စီးပွားလည်းရှာတတ်တယ် တူးဝေးရတယ်နော်…….. ချစ်ချစ်ရှာရင်
ကျွန်တော်ထိပ်ဆုံးကလာပြီး CVတင်မယ် ။
ပထမဆုံး post မှာကတည်းက ဒီလက်ကလေး စာရေးကောင်းတယ်လို့ မှတ်လိုက်မိသား။ခုမှ မိတ်ပြန်ဆက်ရတယ်ပေါ့။
အိမ်ရှင်မလည်း ဒီဂေဇက်မှာ လူရာဝင်ပါတယ်။
ဂေဇက်ကို ငွေကြေးအရ အရေးပိုင်တို့၊သူကြီးတို့ ပိုင်ပေမယ့်
ဒို့ရွာသူရွာသားတွေက ဒို့အားလုံးနဲ့ ဆိုင်တယ်လို့ သတ်မှတ်ထားကြတာပါ။
ရွာထဲမှာ ဒီမိုကရေစီ အပြည့်နဲ့နေရလို့လည်း ပျော်ကြပါတယ်။
မိုချိုလည်းနောင်ဆို ဂေဇက်နဲ့ မျက်နှာသစ်ရပါတော့မယ်။
ပြည်တော်ပြန်လာရင်လည်း ကြိုဆိုနေမှာပါ။ခဏဖြစ်ဖြစ် အမြဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။
ဒို့သူကြီးက သူမပြန်ချင်တိုင်း လျှောချတယ်။ မဖြစ်လာနိုင်ပါဘူး၊အလကားနောက်တာပါတဲ့။မီးဒုတ်ပါဗျို့။
အဲဒါ မန်နေဂျာ အလုပ်ရဲ့အစပေါ့နော်
ဒါဆို မိန်းမလေး 20 လောက်ယူပြီး စီမံခန့်ခွဲလုပ်အုံးမယ်
ဘီအီးဒီစီကြောင်ကြီးမှ ဘီအီးသမားများအားလုံးကို ကြိုဆိုပါတယ်…
အားလုံး ပုံစံ… #$%^သားတွေ ပုံစံထိုင်တယ်ဆိုတာ နားမလည်ဘူးလား။ ကြမ်းပြင်မှာ ဆောင့်ကြောင့်ထိုင် လက်နှစ်ဖက်ကို ဒူးပေါ်ဆန့်တင် ခေါင်းကိုအောက်စိုက်ထား… ပြန်စမယ်.. ပုံစံ….$%^#သားတွေ နှစ်ခါမပြောဘူး မှတ်ထား၊ မင်းတို့ အပြင်မှာ ဘာကောင်ဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့ ရွာထဲရောက်ရင် ဗိုလ်နဲ့ဂျို နှစ်မျိုးပဲရှိတယ်။ ရွာထဲမှာနေရင် ရွာစည်းကမ်းနဲ့အညီ နေရမယ်၊ ရွာလူဂျီးတွေ ပြောစကား နားထောင်ရမယ်။ ထဆိုထ ထိုင်ဆိုထိုင် အိပ်ချိန်အိပ် စားချိန်မှာစား ပေးသမျှယူ ကျွေးသမျှစားလိုက် အထွန့်မတက်နဲ့။ ပြသနာရှိရင် ရွာလူဂျီးများကို စည်းကမ်းသေသေဝပ်ဝပ်နဲ့ တင်ပြနိုင်တယ်။ တုတ်ယူမလား၊ မုန့်ယူမလား ကြိုက်တာရွေးနိုင်တယ်….။
အစ်မ မိုချိုရေ … အရောင်သွေးစုံလင်ပြီး ပျော်စရာကောင်းလှတဲ့ ဂေဇက်ရွာလေးက ကြိုဆိုပါတယ် … ။
အခုမှ စာစရေးတာတောင် … အရေးသား ညက်လွန်းလှပါတယ် … စာရေးကောင်းသူတစ်ယောက်တိုးလာတာ … ရွာကြီး ပိုပြီး စည်ကားသွားတာပေါ့ အစ်မရေ … ။ နောက်တင်မယ့် ပို့စ်များကိုလည်း … စောင့်ဖတ်အားပေးပါဦးမယ် …. ။ အိမ်ရှင်မတစ်ယောက်က အိမ်တွင်းမှာနေပေမယ့် …. တစ်ကမ္ဘာလုံး ဘာဖြစ်နေသလဲ သိနိုင်တယ်ဆိုတာ… သက်သေထူလိုက်ပါ အစ်မရေ …
မင်္ဂလာဘားးးးး .. (အာဇာနည်.. လေသံဖြင့်)
ရွာသူအသစ် မကြီးမိုချိုကို နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်ဗျား
ဒါနဲ့ စကားအတင်းစပ် မကြီးမိုချိုက ဒီမိုကရက်တစ်လား ကွန်ဆာဗေးတစ်လားဟင်…င်င်င်